Qarax xooggan oo goor dhow ka agagaarka Hotelka Wehliye ee Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho, iyadoo qaraxan saameyntiisa si aad ah looga dareemay magaalada oo dhan.
Sida ay sheegayaan wararka qaraxa ayaa ka dhacay agagaarka Hotel Wehliye, waxaana la sheegay inuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Uuro iyo qiic cirka isku shareeray ayaa laga arkayay meelo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana xajmiga qaraxa uu ahaa mid aad u xooggan.
Waa qaraxii labaad oo saacado gudahood ka dhaca magaalada Muqdisho, qarax gaari loo adeegsaday ayaa saaka ka dhacay meel ku dhow saldhig ciidan oo ku yaala degmada Wadajir.
Nin madaxa looga jiray oo xaaskiisa ku gowracay degmada Guriceel